Qiimaha guryaha oo laga digay in uu ka abuuro dalka burbur dhaqaale - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
The IMF warned in a report that Sweden needs to do more to cool down its housing market. Photo: Jessica Gow / TT.
Qiimaha guryaha oo laga digay in uu ka abuuro dalka burbur dhaqaale
La daabacay tisdag 6 oktober 2015 kl 12.30
Todobankii saano ee ugu denbeeyey qiimaha ay jogaa guryaha Sweden ayaa afar jibaarmay – haddana markii ugu horeysay waddankan Sweden waxaa laga soo saaray dignin qiimha aadka u kacay ee guryaha in dhalayaan burbur dhaqaale.
Madaxa rugta raadraacd seyladda dhaqaalaha Konkursinstitutet Mats Dillén ayaa ku tilmaamay qiimaha guryaha Sweden heer aan caqli gal aheyn
– Qiimaha guryaha kor ayey u sii socdaan. Waxay kor u sii kacaan boqolkii 10 illa 15 sannadkii, ma ahan heer caqli gal ah oo weligeed sii socon karta, ayuu yeri Mats Dillén.
Markii ugu horeysay taariikhda cariga ah ayey rugta raadraacda sayladda dhaqaalaha ka soo saartay diigniin ah in suuqa guryaha uu qatar qiimo jab waddanka ka abuura burbur dhaqale.
– Imminka waan ka welwelsanahay. Waxaan ku soconaa xaalad aan la difaaci karin oo aan caqli gal aheyn, waaxaan aaminsanahay in la joogo goortii bareega loo qaban lahaa xaaladda qiimaha guryaha, ayuu yeri Mats Dillén oo ah agaasimaha guud ee rugta Konjunkturinstitutet.
Maxaa ka welwelsan tahiin?
– waxaan ka welwelsanahay in qiimaha guryaha ay waqti dheer kor u si socdeen.
Hey’addo badan oo caalemiya ayaa waqtiyadii ugu denbeeyey ka digayey sida ay wax u socdaan xaaladda suuqa guryaha Sweden. Hey’adda lacgta aduunka IMF iyo weliba ururka ay ku mideysan yahiin waddamada horumaray OECD ayaa horey uga dhawaajiyey in loo baahan yahay wax ka qabad si loo yareeyo oo loo qaboojiyo qiimaha kor u sii socda ee suuqa guryaha Sweden. Taas oo hadda ay xataa rugta raadraacda seyladda dhaqaalaha ayana ku baaqeyso.
– haddii sidas ay wax ku sii socdaan oo aan wax laga qaban oo bareega loo qaban, waxaa dhaci karta in dhawaan qiimo jab weyn uu dhaco guryaha kaas oo ay dhaci karto in uu keeno burbur dhaqaale, ayuu yeri Mats Dillén.
warbaxin aarinta SVT ka diyaariyey